Xog: Dalka Talyaaniga malaayiin dad ah oo la karantiilay. – Banaadir Times
Xog: Dalka Talyaaniga malaayiin dad ah oo la karantiilay.
By banaadir 8th March 2020 179
Talyaaniga ayaa ilaa 16 milyan oo qof karantiilay isagoo isku dayaya xakameynta faafitaanka caabuqa cusub ee coronavirus.
Qof walba oo ku nool gobolka Lombardy iyo 14 kale oo gobol oo bartamaha iyo waqooyiga dalkaasi ku yaalla ayaa u baahnaan doona oggolaansho uu ku soo galo amaba kaga baxo gobolladaas. Magaalooyinka Milan iyo Venice ayuu sidoo kale go`aankan saameeyay.
Wararka kale ee soo kordhay:
Hoteel dadka lagu karantiilayay oo ku yaalla magaalada Quanzhou ee dalka Shiinaha ayaa soo dumay – 47 ka tirsanaa 70 qof oo halkaasi ku go`doomay ayaa la soo badbaadiyay
Pope Francis ayaa lagu wadaa inuu maanta qadka si toos ah ugala hadlo dadka Kirishtaanka ah si looga fogaado isu imaatinka ballaaran ee dadka
Dalka Sacuudiga, weli waxaa xiran Kacbada.
Midowga Afrika oo si kulul ooga hadlay xiisada siyaasadeed ee Kenya iyo Soomaliya.
Qaramada Midoobay oo heshiis la gashay Itoobiya si gargaar loo gaarsiiyo gobolka Tigree!